Kadhannaa Torbii (Subaa’ee), Maalummaa fi Sirna Isaa – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
August 9, 2017 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Sirna Kadhannaa torbii (Subaa’ee)
Kadhannaan torbii Maaliidhaa? Kadhannaan torbii madda jecha irraa dhufeen torba jechuu dha. Kadhannaan torbii hiika Afuurawaatiin kan namni tokko guyyaa kanaa hanga guyyaa kanaatti kadhannaadhaan Uumaa koo waliin nan quunnama jedhee karoora afuuraa karoorfatu dha. Lakkoofsi torba Israa’elota biratti hojiinis ta’e jechaan kan ibsu waan gonka ta’an dha. Fakkeenyaaf, uumaan addunyaa Waaqayyo guyyaa toorbaffaatti sirna Uumamaa erga uumeen booda boqochuun Isaa amantootni guyyaatti al toorba kadhannaaf dhaabbachuuun galateeffachuun isaanii gonkummaa lakkoofsa toorbaa agarsiisa. Uum 2:2, Faar 18:164. Akkaataa kanaan namni tokko guyyoota toorbaaf yoo tsoomu, torbee kadhannaa (subaa’ee) tokko tsoome jedhama. Guyyoota kudha afuriif yoo tsoome, Kadhannaa torbii (subaa’ee) lama tsoome jechuun ibsama.
Kadhannaan torbii (subaa’een) Yoom jalqabame?
Kadhannaan torbii kan jalqabame kufaatiin booda nama jalqabaa Addaamiinii dha. Ergamoonni qulqulloonni, waa’ee kadhannaa Addaamiin akka barsiisan hayyoonni Kitaaba Qulqulluu ni dubbatu. Ergamoonni, Addaamiin yeroowwan/waqtiilee barsiisanii turan(Hiikkaa Sirna qulqulleessaa Maariyaamii). Addaam badiisaa amanee galaana keessatti Kadhannaa torbii galuu fi kadhachuu isaatiin, Waaqayyo jecha Isaa hin jijjiiramneen “Guyyoota shanii fi walakkaan booda dhala dhala keerraa dhaladheen sin fayyisa” jechuudhaan kakuu galeefii ture. (Qalemeenxoos, boqonnaa4).
Kadhannaan torbii (subaa’een) Maaliifi?
Dhalli namaa qaama cubbuu waliin wal-simatuun guyyaa guyyaatti uumaa isaa ni yakka. Sababa yakka raawwaateef immoo sammuun isaa isa ceepha’a; ni gaabbas. Cubbuu jalqaba ija jabinaan hojjeteef boodarra ni na’a. Kun sammuu nama uumamaa kamiyyuu keessatti mudannoo jijijjiiramuudha. Yeroo kanas dhiifama Uumaasaa argachuudhaaf ni yaada, ni gaddas. Qulqulluun Phaawuloosis “Keessa kootti, namummaan koo seera Waaqayyootiin ni gammada;haa ta’u malee, seera cubbuu kutaa qaama kootiitiin jiruun kan na booji’u/hawwatu seera biraa nan arga. Ani nama qullaa akkamiitii? Kanaaf namummaa duuti itti kenname kanarraa eenyutu na fayyisa?” jedheera. Room 7:22-25
Namni ija jabina isaatiin, abboommii Waaqayyo olaanaa cabsuudhaan seerri addunyaa yommuu isa dhiphistu ba’aa isaa kan ittiin salphifatuu fi kan ittiin balleeffatu ogummaan Afuuraa Uumaa arjaa irraa isaaf kennameera. Kunis dadhabbiin foonii xiqqoon kan hin murteeffamne, kennaa Waaqayyoo kan ittiin argatu sirna Kadhannaa torbiitiini dha. Durii hanga har’aatti, namni tokko addunyaa yaadoon guutamte kana keessatti afuurri isaa yommuu jeeqamu, tasgabbii lubbuu fi foon isaa deebisuudhaa fi kabachiisuuf tsoomuu fi kadhachuun dirqama isatti ta’a. Yeroo kana jabeessee Kadhannaa torbii gala.
a) Waaqayyoon Kadhachuuf
Dhimmoota bu’uuraa namni tokko Kadhannaa torbii qabatuuf keessaa inni tokko Waaqayyoon kadhachuufi dha. Namni kamiyyuu Kadhannaa torbii yeroo galu guutummaadhaan gara Uumaa isaatti kadhannaan inni dhiyeeffatu jiraachuu qabaata. Waanti nuti gaafannuu fi waanti kadhannu osoo hin jiraatiin Kadhannaa torbii yoo galle/qabanne deebiin nuti argannu hin jiraatu. Haal-duree qophii tokko malee Kadhannaa torbii namoonni galan sagantaa Kadhannaa torbii sanaan booda maaltu akka isaaniif deebi’u waanti beekan waan hin jirreef dadhabbii isaaniitiin waanti isaan argatan hin jiru.
Kanaafuu, Kadhannaa torbii galuu keenyaan duratti, Kadhannaa torbii maaliif galla? jechuudhaan mataa keenya gaafachuutu nurraa eegama. Fakkeenyaaf, Kiristaanni tokko waa’ee naannoo jireenya dhuunfaa isaa, nageenya biyyaa, fayyummaa hiriyyaa isaa fi dhimmoota k.k.f. irratti Uumaa isaa ni kadhata. Yeroo kana jireenya dhuunfaa isaatiis ta’e dhimma biyyaatiif Kadhannaa torbii galeef yeruma sanatti deebii argachuu danda’a; akkasumas deebiin isaa turuu ni danda’a. Yeroo kana nama kadhannaa qabate irraa obsi ni eegama. Gaaffiin ani dhiyeessee maaliif dafee deebiin naaf hin kennamne? jechuudhaan dhiphachuunii fi Waaqayyoon qoruun barbaachisaa miti. Waaqayyoon hojii Isaa kan itti raawwatuu fi kan Isa kadhataniif deebii kennuudhaaf yeroo mataa Isaa qaba. Fakkeenyaaf, sababa kufaatii hiriyyaa isaatiin Kadhannaa torbii galee torbee tokko keessatti deebii kan argate seenaa tajaajilaa kawaala (gadaamii) tokkoo ilaaluun barbaachisaa dha.
Obboloonni lama ergamaaf bakka bahanitti, isa tokko kufaatiin cubbuu isa mudatee buleera. Erga bari’ees, “Anaan kufaatiin na mudateeraatii ani kanaan booda gara kawaalichaatti hin deebi’u; addunyaa fakkaadheen jiraadha” jedhe. Inni lammataas, “Anas mudateera; egaa deemnee cubbuu keenya barsiisa gaabbii keenyatti himannee qanoonaa keenya fudhannee akka duraa taanee ni jiraanna” jedhee jajjabeessuun fuudhee deeme. Deemanii abbaa gaabbii isaaniitti himanii qanoonaa (adaba yakka isaanii) fudhachuun Kadhannaa torbii tokko galuun yommuu qanoonaa isaanii xumuranitti, “Egaa obboleessa kee isa cubbuu hin hojjanneetiif jedhee siif dhiiseera” sagalee jedhu dhageessiseera. (Seenaa Abbootaa)
Armaan olitti tajaajiltoonni kawaalaa (gadaamii) seenaa isaanii dhiyeessine, tajaajilaaf bakka itti ergamanitti isa tokko cubbuun argatee yommuu kufu, hiriyyaan isaa garuu cubbuun akka waan isa argatee taasisee hiriyyaa isaa jajjabeessee gara kawaalaatti deebisuudhaan tokko ta’anii Kadhannaa torbii galuu isaaniiti. Kadhannaa torbii tokko (guyyaa toorba) akkuma xumuraniin Waaqayyoon biraa, “Cubbuu osoo hin hojjatiin siif jedhee Kadhannaa torbii kan gale obboleessa keetiif jecha siif dhiiseera” kan jedhu deebii ariifachiisaa argateera. Kanaafuu, Kadhannaa torbii jireenya dhuunfaatiifis ta’e jireenya hiriyyaatiif yommuu gallu, deebii ariifachiisaa ykn kan turu nuuf kennuu waan danda’uuf obsaan eeguun nurraa eegama.
b) Suga Qulqullootaa Irraatii Hirmaachuudhaaf
Abbootiin fi haadholiin keenya qulqulloonni wareegamummaa isaan wareegaman yaadachuudhaan kawaalotaa fi Manneen Kiristaanaa jechi waadaa kennameefitti Kadhannaa torbii galamu qooddattoota suga qulqulloota sanaa nu taasisa. Qulqulloonni bakka wareegamanitti, “Ijoollee dhiiraa fi dubaraa caala maqaa caalu nan kennaaf; kan hin badne maqaa bara baraa nan kennaaf” (Isa 56:6) jechuudhaan Waaqayyoo waadaa waan isaaniif galeef Kadhannaa torbii galuudhaan suga isaanii irratti hirmaachuun ni danda’ama. Tsooma Raajotaatiin suga Raajotaa irratti hirmaachuun, tsooma Duuka bu’ootaa irratti hirmaachuun suga Duuka bu’ootaa irratti hirmaachuu fi tsooma Filsataa irratti hirmaachuudhaan eebba Giiftii keenyaa irratti hirmaachuudhaaf Kadhannaa torbii galuun kan turee fi gara fuulduraattis seera Mana Kiristaanaa jiraatuudha. Har’as sirna kana hordofuudhaan suga qulqullootaas argachuudhaaf, lafeen qulqullootaa kawaala itti boqotetti, tsoomaa fi kadhannaadhaan, humnaanis kawaalota tajaajiluudhaan eebba qulqullootaa kan argatan kawaalota keessatti kasoominaan kan deddeebi’an danuudha. Kanas, kitaaba Moototaa 2ffaa 2:9 irratti akkuma ilaallu, Raajichi Eelsaan barsiisaa isaa, Eeliyaas, tajaajiluudhaan, sugni Eeliyaas dachaadhaan Eelsaa irra buleera. Kanas fakkeenya taasifachuudhaan abootiin keenya kan qaban hunda dhiisuudhaan kawaalota keessakadhannaan jiraatan suga abbaa kawaala itti tajaajilanii fudhatu. Kun akka jirutti ta’ee, maqaa kawaalummaatiin maallaqa amantootaa kan saamanii fi jireenya qulqullaawaa monoksootaa dhugaa kan xureessan jiraachuu isaanii hubachuun barbaachisa.
c) Iccitiin Dhokate Akka Nuuf Ifuuf
Bara Kakuu Moofaatti Waaqayyo mootota tokko tokkotti mul’ata agarsiisuun iccitii Isaa jalaa dhoksaa ture. Fakkeenyaaf, kan biyya Gibxii Fara’oon, kan Baabiloon immoo Naabukadanatsoorii fi Bilxaasoor caqasuun ni danda’ama. Uum 41:14-36, Daan 4:9 fi 5:4. Moototni kunneen jireenya dhuunfaa isaaniittis ta’e addunyaa guutuutti wanta gara fuulduraatti ta’uuf mul’ata arganis, dafanii mul’aticha sirriitti hubatanii gahumsa “Akkana ta’a” jedhu hin qaban turan. Kanarraan kan ka’e, Raajonni bara isaaniitti jiraachaa turan, Kadhannaa torbii galuun hiikkaa mul’ata isaanii akka itti himaniif kadhachaa turan. Raajonnis Kadhannaa torbii galuudhaan mootonni kan argan dubbii iccitii Siggaawwee fi akkaataa kufaatii mootummaa isaanii ibsanii dubbachaa turan. (Daan 5:28).
Akkasumas, qulqulloonni matuma isaaniitiin iccitiin mul’ata arganii yommuu itti ulfaatu, iccitii fi hiikni mul’atichaa akka isaaniif ifuuf Kadhannaa torbii galu. Waaqayyos qulqullummaan ta’anii Kadhannaa torbii galan ilaalee iccitiisaa ni ibsaaf. Fakkeenyaaf, Raajichi Izraa, iccitiin kitaabolee akka isaaf ifuuf Kadhannaa torbii yommuu galu, kitaaboleen Kakuu Moofaa badan immoo deebisee barreessuuf danda’eera. Faar 8:10
Bara Kakuu Haaraatti bal’inaan kan mul’atu Duuka bu’oonni qulqulloonni Hagayya 1-14 Kadhannaa torbii isaan galaniidha. Kadhannaan torbii kun du’aa ka’umsa qulqulleettii Dubree Maariyamii dhokatee ture hubatanii suga ishee irraatii hirmaachuudhaaf isaan dandeessiseera.
Giiftiin keenya kan boqotte, Amajjii 21, B.A. 49 dha. Duuka bu’oonni awwaaluudhaaf gara Geete-Semaaniitti fuudhanii yommuu deeman, Yihuudonni isaan jeeqan. Yeroo kana ergamoonni qulqulloonni foon Giiftii keenyaa fuudhanii Gannatatti muka jireenyaa jala kaawan. (Ajaa’iba Maariyamii, Sinkisaara Hagayya guyyaa 16). Yeroo kana Duuka bu’oonni wareeranii waanta faffaca’aniif, boqonnaan foon Giiftii keenyaa isaan dhiphisaa ture.
Qulqulluun Yohaannis, mul’ataan fudhatamee deemuudhaan foon isheetti ixaana urgeessaa tureera; Duuka bu’ootattis himaa ture. Yohaannisitti mul’attee nuyitti akkam hin mul’anne jechuun Hagayya keessa Kadhannaa torbii galan. Kadhannaa torbii inni lammaffaan yommuu xumuramutti, guyyaa 14ffaatti ergamaan foon ishee fidee isaanitti kenneera; awwaalaniirus. Guyyaa sadaffaatti, Hagayya guyyaa 16 kaatee ol baateetti. (Ajaa’iba Maariyamii, Sinkisaara Hagayya guyyaa 16).
Egaa Duuka bu’oota qulqullootaaf iccitiin boqonnaa fi ol-bahiinsa Giiftii keenyaa kan isaaniif mul’ate Kadhannaa torbiitiinii dha. Kanas bu’uura taasifachuudhaan, Manni Kiristaanaa duuka bu’eettiin suga ol-ba’iinsa Giiftii keenyaa argachuudhaaf ni tsoomti. Manni Kiristaanaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaas yeroo Kadhannaa torbii kana daa’immanillee osoo hin hafiin irratti hirmaatu.
Itti Fufa ….
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-08-09 13:44:492018-10-26 09:21:00Kadhannaa Torbii (Subaa’ee), Maalummaa fi Sirna Isaa
Promotion picture Kutaa 2ffaa Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa